Kooxda Elman oo si dirqi ah ugaga badisay Dekedaha
Updated About:225 days ago 0
Kooxda Horyaalka difaacaneysa ee Elman ayaa fara-ciddi leh ku guuleysatay intii ay socotay ciyaar u muuqatay in ay bar bar dhac ku dhamaaneyso kaddib markii ay goolka guusha heshay daqiiqadii 90-aad ee cayaarta xili garsooruhu afka ku hayay seeriga, waxaana cayaartu ay ku dhamaatay 3-2.
Cayaartii maanta oo soo jiidatay dareenka daawadayaal tobaneeyo kun gaaraya oo ka kala yimid degmooyinka Muqdisho iyo deegaanada ku dhow dhow ayaa lagu tilmaamay cayaartii ugu xamaasada badneyd tan iyo intii horyaalka Soomaaliya uu dib u furmay bishii hore.
Cayaarta ayaa ku bilaabatay dar dar xoogan iyo weerar iyo weerar celis, waxaana kooxda Elman ka go’neyd in ay guuleysato si ay 7 dhibcood ugu hogaamiso tartanka halka kooxda Degedaha oo ka mida kooxaha ka cararaya in ay heerka 2-aad dib ugu laabtaan ay iyaduna guul ku dadaaleysay maanta.
Laakin labada kooxood midna uma suuragelin in ay qeybtii hore hesho wax gool ah waxaana qeybta hore lagu kala nastay 0-0,hase ahaatee daqiiqadii 50-aad ee qeybta dambe ayaa Elman waxaa goolkii daah furka u saxiixay cayaaryahan Cabdul Qaadir Axmed, balse Deekdaha ayaa helay goolkii bar bar dhaca kaddib markii uu cayaaryahan Cabdul Qaadir Cali Nuur u dhaliyay gool daqiiqadii 79-aad ee cayaarta.
Markii goolka bareejadu dhashay ayaa garoonka oo dhan uu isla kacay iyadoo taageerayaasha oo dhan ay istaageen iyagoo ku dhawaaqayay hal ku dhigyo iskasoo horjeeda oo labada kooxood lagu kala taageerayay.
Cayaaryahanka numberka 9-aad u xirta kooxda Elman Maxamed Nuur Cabdi ayaa gool la helay shabaqa kasoo horjeeda daqiiqadii 81-aad ee cayaarta waxaana uu ka dhigay 2-1 balse hogaankaasi siima socon oo dekedaha ayaa waxaa gool kale u dhaliyay cayaaryahan Zakariye Cabdi Siyaad daqiiqadii 85-aad ee cayaarta qeybteedii dambe.
Intaa kaddib cayaartu way sii kululaatay waxaana bilowday weerar iyo weerar celis, waxaana u suuragashay kooxda Elman in ay helaan goolka guusha daqiiqadii 90aad xili uu garsooruhu afka ku hayay seeriga uuna ku dhawaa in uu ku dhawaaqo seeriga dhamaadka cayaarta waxaana golkaas guusha u dhaliyay Elman Cayaaryahan Badri macalin Axmed.